Samsung dia mandefa ny fampiharana ao amin'ny App Store hahafahana mitantana Gear S2, Gear S3 ary Gear Fit avy amin'ny iPhone | Vaovao momba ny gadget
Ny fampiharana izay nampanantenain'ny orinasa Koreana Samsung hanomboka tamin'ny taon-dasa dia efa lasa ela be, volana taorian'ny nanolorany ny Gear S2, maodely iray nanaitra ny mponina sy ny vahiny ary nanjary tombam-pahasoavan'ny tenany manokana io iray amin'ny smartwatches tsara indrindra azontsika jerena eny an-tsena. Misaotra ny fampiharana Samsung Gear S, afaka mitantana ireo fitaovana izahay Samsung Gear S2, Gear S3 ary Gear Fit avy amin'ny iPhone, eny, miaraka amin'ny fetra atolotry ny ecosystem ecosystem antsika, izay iray ihany no ahafahantsika mifandray, tsy afaka mamaly antso, hafatra, manemotra ny hetsika agenda ...
Ireo fitaovana ireo dia mitaky fampiharana amin'ny mpanamboatra azy satria izy io dia efa tsy mitovy amin'ny faran'ny terminal azo ampitaina izay hitantsika eny an-tsena. tsy ampiasain'ny Android Wear, fa i Tizen no mandeha, ny rafitra miasa izay nandritra ny roa taona dia lasa safidy tokana hampiasaina amin'ny smartwatches izay alefan'ny orinasa eny an-tsena. Tizen dia manolotra fitantanana bateria mahomby kokoa noho ny Android Wear, fa ireo maodely telo koa dia natao hiara-miasa amin'ny Tizen, mitovy amin'ny terminal iOS sy Apple.
Rehefa afaka taona vitsivitsy, izay fitaovana azo anaovana ny orinasa koreana dia tsy nifanaraka afa-tsy tamin'ny finday avo lentaNanaiky i Samsung fa hadalana ny mametra ny fampiasana ny fitaovany amin'ny ekosistia. Ho fanampin'izany, manitatra be ny isan'ny olona hieritreritra indroa izao rehefa misafidy Gear S2 / S3, Apple Watch na Smartwatch miaraka amin'ny Android Wear. Raha te hampiasa ity rindrambaiko ity sy hahafahana mampifandray ireo fitaovana roa ireo dia ilaina ny manana iPhone 5 farafaharatsiny farafaharatsiny miaraka amina kinova iOS 9 na napetraka taty aoriana.
Samsung Galaxy Watch (Gear S)maimaim-poana
Samsung Galaxy Fit (Gear Fit)maimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Gadgets » SmartWatch » Samsung dia mandefa ny fampiharana ao amin'ny App Store hahafahana mitantana Gear S2, Gear S3 ary Gear Fit avy amin'ny iPhone